Diki Bhizinesi Yemagariro Midhiya Usage uye Mhedzisiro | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 30, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
CrowdSPRING yakaburitsa iyi infographic pane diki bhizinesi rezvenhau maitiro. Pandakatanga kuona iwo mashandisirwo, ndakamboshamiswa nekushomeka kwekuti mashandisiro emashandisirwo ebhizinesi diki. Tarisa zvakadzama uye ndinofunga hazvishamise, zvakadaro. Izvo zvine hunyanzvi hwakasimba kumhanyisa rakabudirira diki bhizinesi saka kutsigira yemagariro midhiya kuvepo kunogona kuve kunonetsa.
Izvo zvakati - iwo mukana unoshamisa wevamwe vanhu vanomhanyisa bhizinesi diki. Zvinotaridza kuti hapana kana kukwikwidzana kunze uko! Kutanga blog uye ive yako musika. Shingairira munzanga vezvenhau uye kuvaka vateereri vako. Izvo hazvisi kuzotendeuka bhizinesi rako nehusiku, asi imari inoteerera iyo ichabhadhara. Zvinogona kutora mavhiki, zvinogona kutora mwedzi… asi iwe unofanirwa kuita. Ukasadaro, vakwikwidzi vako vachadaro.
Crowdsourced Logo uye Graphic Dhizaina nechaungaSPRING
Sep 30, 2011 na5:58 PM
Izvi zvine ruzivo rwakawanda runonakidza… Imwe nhamba kunyangwe iyo, kwandiri, inoita seisinganakidze zvachose idanho rekuti 51% yevashandisi vefacebook vangangotenga zvigadzirwa zvemhando dzavanotevera kana vateveri vadzo.
Chokwadi? 51% chete? Kana tikafunga kuti vamwe vese havana hanya, hazvina kunaka. Asi ko kana tikafunga kuti zvimwe zvacho ZVINOKOSHA zvingangoitwa nezvigadzirwa? Iyi haisi nhamba yakanaka kwazvo ipapo.
Ini ndaizonyanya kufunga kuti yakakwira, nekuti vanhu vazhinji vangango tevera mabhureki avanotoda. Muchiitiko chipi, nhamba iyi inoreva chero chinhu zvachose? Iwe unotevera mhando dzaunonyanya kutenga kubva, zviri pachena. Saka chii chiri kumashure kweizvi? Ivo vangangotenga zvakanyanya semhedzisiro yekuve fan pafacebook chaizvo? Kana zvakadaro, izvo zvingatoreva chimwe chinhu.
Asi handifungi kuti pangava neimwe nzira yokuyera nayo izvozvo. Saka, sezvazvakamira, handifungi kuti chero munhu anofanira kuverenga zvakanyanya munhamba iyi.
Mobile Webhusaiti Dhizaini
Izvi zvechokwadi zvine ruzivo rwakawanda runonakidza